Umphakeli Ohamba Phambili We-10Inch White Memory Foam | Rayson
Rayson eRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Imikhiqizo eyinhloko Umhlinzeki Wemibhede Emibhedeni Emhlophe engu-10Inch White
Lo mkhiqizo uphikisana kakhulu namagciwane. Izinto zayo ezinempahla eqinisa umswakama zingasiza ngempumelelo ukuvimbela ukukhula kwamagciwane abangela iphunga ezinyaweni.
I-Rayson Global Co., Ltd ibhizinisi elihlanganyelwe le-Sino-US, elisungulwe ngo-2007 eliseShishan Town, eFoshan High-Tech Zone, futhi lakhiwe eduze kwamabhizinisi adumile njenge-V
Kuze kube manje, uRayson udlulise isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi yamazwe omhlaba jikelele. Yonke imikhiqizo kufaka phakathi umkhiqizo wethu omusha unikezwa ngemiklamo emisha, ikhwalithi eqinisekisiwe, kanye namanani wokuncintisana. Ngemuva kweminyaka yentuthuko, sisungule ubudlelwano bokubambisana besikhathi eside namakhasimende ethu emhlabeni jikelele. Sicela uqiniseke ukuthi sinelungelo lokuthekelisa imikhiqizo yethu futhi ngeke kube khona umonakalo owenzekile empahleni ehanjisiwe. Samukela ngobuqotho uphenyo lwakho futhi ushayele. Ngemigqa ephelele yokukhiqiza nabasebenzi abanolwazi, uRayson angakwazi ukuzimela, athuthukise, akhiqize, futhi avivinye yonke imikhiqizo ngendlela esebenza kahle. Kuyo yonke inqubo, ochwepheshe bethu be-QC bazobheka inqubo ngayinye ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo. Ngaphezu kwalokho, ukulethwa kwethu kufika ngesikhathi futhi kungahlangabezana nezidingo zawo wonke amakhasimende. Siyathembisa ukuthi imikhiqizo ithunyelwa kumakhasimende ephephile futhi ezwakala. Uma unemibuzo noma ufuna ukwazi kabanzi mayelana nathi, sishayele ngqo. Selokhu yasungulwa, uRayson uhlose ukuhlinzeka ngezixazululo ezivelele nezihehayo kumakhasimende ethu. Sisungule owethu uR& D isikhungo sokwakhiwa komkhiqizo nentuthuko yomkhiqizo. Silandela ngokuqinile izinqubo ezijwayelekile zokulawula ikhwalithi ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu ihlangabezana noma yeqa okulindelwe ngamakhasimende ethu. Ngaphezu kwalokho, sinikezela ngezinsizakalo zokuthengisa ngemuva kwamakhasimende emhlabeni wonke. Amakhasimende afuna ukwazi kabanzi ngomkhiqizo wethu omusha noma inkampani yethu, vele uxhumane nathi.
Yiziphi izindlela zokukhokha ozamukelayo? I-LC ngokubona / nge-TT, i-30% yeDeposi ne-70% esele iphikisana namakhophi wemibhalo yokuthumela i-witinin izinsuku zokusebenza eziyi-7. 1.Beka ibhokisi phezulu endaweni eyisicaba egumbini lakho lokulala, donsela umatilasi ngokucophelela bese ubeka embhedeni wakho. 2.Sika ngokucophelela isikhwama sangaphandle ngesikele uqiniseke ukuthi awusiki ipulasitiki embi ngaphakathi noma kumatilasi, ungammangaleli ummese. Khipha umatilasi ovaliwe ongenalutho embhedeni wakho 4. Sika ngokucophelela isikhwama sepulasitiki eceleni kwewashi njengoba umatilasi eqala ukuwohloka ngokushesha, Susa isikhwama sepulasitiki. 5.Vumela amahora angama-24 ukuthi omatilasi bakho abasha banwebe ngokuphelele.Ngabe ngivakashela imboni yakho? Yebo, wamukelekile ukuvakashela imboni yethu nganoma yisiphi isikhathi, siseduze nesikhumulo sezindiza saseGuangzhou Baiyun, kungathatha ihora elilodwa ngemoto, futhi singahlela imoto ukukucosha.